Zapya Go- အခမဲ့ File Transfer & Sharing အကြောင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ » Zapya Go- အခမဲ့ File Transfer & မျှဝေခြင်း
Zapya Go- အခမဲ့ File Transfer & မျှဝေခြင်း APK ကို
Zapya Go ကိုမြန်ဆန်စွာနောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်စစ်ဖြစ်ပါသည်, ပေါ့ပါးဖိုင်မျှဝေခြင်းကိုလျှောက်လွှာ, Zapya နေသူများကဖန်တီးသောသူတူညီတဲ့အသင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှအပူဆုံး Cross-platform ဖိုင်လွှဲပြောင်း application ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ Zapya Go ကိုသင်တစ်ဦးသေးငယ်အထုပ်ထဲမှာ မှလွဲ. Zapya အကြောင်းကိုကိုချစ်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုရှိပါတယ်။ မသာကိုသင် Zapya Go ကိုနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်းဖိုင်တွေမျှဝေခံယူနိုငျသညျ, သငျသညျမြားကိုလညျးအော့ဖ်လိုင်း chat နိုငျပါသညျ!
Zapya Go ကိုသင့်ရဲ့သိုလှောင်ရန်နေရာနည်းတက်ယူနှင့်သင့်ဖုန်းတွင်ဖွင့်နေရာလွတ်ကိုကူညီပေးပါဒါကြောင့်အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်သူ့ဟာသူ prides ။ လျှောက်လွှာအတွင်း, သင်ပိုမြန်ဖိုင်တွေတွေ့ပါနဲ့အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ contents စီမံနိုင်သည်။ ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းဂိမ်းကိုသင် go.Spotlight အင်္ဂါရပ်များအပေါ်ခဏဆော့ကစားနိုင်အောင်လည်းရှိပါတယ်:
•လိုက်ဖက်တဲ့: Zapya Go ကိုဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူသင်တို့ပတ်လည်သူတို့နှင့်အတူဝေမျှနိုင်ပါတယ် Zapya နဲ့ Zapya MiniShare နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
•ကိုအော့ဖ်လိုင်းမျှဝေခြင်း: သင် Zapya Go ကိုသုံးပြီးဖိုင်တွေဝေမျှနိုင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
•ဖို့အတွက် QR Code ကိုဝေမျှခြင်း: ဝေမျှမယ်နှင့် QR codes တွေကိုနှင့်အတူအလွယ်တကူဖိုင်တွေကိုလက်ခံရရှိ
• Group မှမျှဝေခြင်း: တစ်ဦးထက်ပိုလူတစ်ဦးနှင့်အတူဖိုင်တွေမျှဝေဖို့လိုပါသလား? Zapya Group မှ ဖန်တီး. Group မှ features တွေသင်အလွယ်တကူမျိုးစုံလူတို့နှင့်အတူဝေမျှဖို့ခွင့်ပြု Join ရဲ့သွားပါ။
•ဂိမ်းပလက်ဖောင်း: ဝေမျှမယ်ဖိုင်တွေနဲ့ပျော်စရာ share! Zapya Go ကိုသင်တို့ထံကရှေးခယျြဖို့အတှကျအွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်။
•အကွိမျမြားစှာဘာသာစကားမြား: အဆိုပါ app ကိုထောက်ခံပါတယ်မီတာတရုတ် (ခေတ်ပေါ်), အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ရုရှား, ထိုင်းနှင့်အင်ဒိုနီးရှား
•အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Chat: အအင်တာနက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဒေတာဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Chat!
•မှတ်ဉာဏ်အပေါ်လွယ်ကူ: ဒီ app အားဖြင့်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိလျော့နည်းမှတ်ဉာဏ်စားသုံးတဲ့နောက်ခံ application အဖြစ် run မထားဘူး။
Zapya Go- အခမဲ့ File Transfer & မျှဝေခြင်း
3.33 ကို MB
RecorderZ - ...